पहिले महिला भएर धेरै गरे अब एकपटक पुरुष भएर गर्न चाहान्छु : नायिका सुरक्षा पन्त – ईमेची डटकम
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही नयाँ गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । नेपाली दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनको लागि चलचित्रकर्मीहरु निरन्तर लागिपरेका छन् । यो भिडमा आउने एउटा नाम सुरक्षा पन्त पनि हो । उनी पेशाले सिभिल इन्जिनियर हुन् । तर, हिजोआज कलाकारितामा छाइरहेकी छिन् । उनले छोटो समयमै उनले आधा दर्जन फिल्ममा आफ्नो अभिनय कौशलता देखाइसकेकी छिन् ।
थोरै फिल्मबाट नै आफ्नो फरक छवि बनाउन सफल सुरक्षाले स्व. आलोक नेम्वाङद्वारा निर्देशित फिल्म अझै पनि बाट नायिकाका रूपमा नेपाली सीनेमामा डेब्यु गरिन् । त्यसपछि चंगा चेट, भैरे, रोमियो एन्ड मुना, सुस्केरा, धनपति, गोपी, घरलगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी उनले केही म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेकी छन् । अभिनयबाहेक टेलिभिजन प्रस्तोता, स्केच कलाकार, कविलगायतको परिचय बनाएकी उनले हालै प्रतीक्षा कट्टेलको लेखन र विजया कार्कीको निर्देशनको नाटक क्लेसाबाट रंगमञ्चमा पनि डेब्यु गरिन् ।
उनले दर्शकसामु केही नयाँ दिनको लागि आफुलाई समलिंगी बन्ने मन भएको बताएकी छिन् । एक पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छिन, ‘आफूभन्दा फरक लिंग तथा समुदायको व्यक्तिका रूपमा अभिनय गर्दा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ त भनेर हेर्न मन छ । हामीले अरूलाई देखेर महसुस त गर्न सक्छौं। तर, महसुस मात्र होइन, अरूको भोगाइ भोगेर उनीहरूलाई नजिकबाट चिन्ने र बुझ्ने रहर छ ।’
पूरै गेटअप नै चेन्ज गरेर पुरुष या समलिंगीको भूमिकामा काम गर्ने इच्छा उनले व्यक्त गरिन् । फरक अनुभूतिका लागि फिल्ममा समलिंगी बन्ने रहर भएको उनी बताउछिन । पछिल्लो समय पन्त फिल्म घरको प्रोमोसनका साथै मास्टरको लास्ट सेमेस्टरको परीक्षाको तयारी गरिरहेकी छिन् । त्यसपछिको समय आमा भन्ने फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हुन्छ । दासढुंगा–२ नामक फिल्ममा पनि उनी अभिनय गर्ने मुडमा छिन ।
ईन्जिनियर नायिका सुरक्षा पन्त, जत्ती राम्री त्यत्ती नै मिठो कुरा
काठमाडौं । नेपाली कलाकारहरु पढ्न नसकेकोले कलाकारितामा भित्रिन्छन् भन्नेहरुको लागि जवाफ हुन्, सुरक्षा पन्त। चलचित्र धनपतीबाट नेपाली चलचित्रमा पाइला टेकेकी सुरक्षा अब अर्को चलचित्र भैरेमा देखिंदैछिन्।
सुरक्षा पन्त इन्जिनियर हुन्। इञ्जिनियरिङ्ग र कलाकारिता दुवैमा सिर्जनात्मकता र कला क्षमता चाहिने भएकोले दुवै पेशा उत्तिकै गाह्रो र सजिलो भएको उनी बताउँछिन्।
उनका अनुसार, डाक्टर, इन्जिनियर पेशाले समाजलाई दिएको योगदान छिट्टै देखिन्छ भने कलाकारिताले पारेको प्रभाव ढिलो देखिन्छ, जसले गर्दा समाजमा कलाकारिता भन्दा डाक्टर र इन्जिनियर पेशालाई बढी सम्मान दिइन्छ।
तर कलाकारितामा कलापनाशक्ति र सिर्जनशीलताको अत्यधिक प्रयोग हुने हुनाले कलाकारिता क्षेत्र उच्च तहको क्षेत्र भएको उनी बताउँछिन्।
सुरक्षालाई चलचित्रको नायक संग जोडेर अभिनेत्रीहरुलाई गरिने प्रश्न मन पर्दैन। उनी भन्छिन्, ‘किन मिडियाकर्मीहरु अभिनेतासंग तपाईंको सम्बन्धको चर्चा के हो भनेर सोध्छन् ? के महिला अभिनेत्रीहरुलाई सोध्नको लागि अरु प्रश्न नै छैनन् ? कलाकारिता क्षेत्र, पेशा, समाज आदिको बारेमा सोध्नुभयो भने, तपाईंले पनि हाम्रो बौद्धिक क्षमता जाँच्न सक्नुहुन्थ्यो नि !